2021-06-23 @ 05:38 in Izaho sy ny ahy
Zavatra tsapako tato ho ato hoe lasa tsotra be ny nofiko. Angamba hoe efa miha be taona. Tsy misy suspens mampitaintaina intsony. Izany nofy ratsy izany moa dia efa ela tsy hita. Ny nofy faran'izay ratsy nitranga angamba dia ilay nanofy hoe mamo. Tamin'izay ara mbola izaho ihany no nanamboatra ny scenario satria tsy sensation mbola niainako mihitsy ilay mamo. Fa ohat'izany daholo ny nofiko amin'izao. Ohatry ny hoe fiainana hafa en parallèle fotsiny ny nofy, zavatra azo tanterahina daholo... nefa hono mba nofy 😊
Taloha nefa misy nofy tena hoe nofinofy. Rehdfa taitra ianao dia mbola miezaka mitady torimaso hanohizana azy. Na foronina eo am-pandriana mihitsy ny épisodes sasany. Dia manofinofy eo. Izany manofy manidina izany tena fahasambarana. Nisy an'izay nofiko manidina niverimberina izay. Tao anatina tunnels maromaro misesy hono... toa lalan'ny fiaran-dalamby mandeha any Ambatolampy. Dia miditra anatin'ny tunnel iray. Rehefa ao anatiny nefa no tonga ny fiara dia manidina aho mba tsy ho tratrany. Im-betsaka mihitsy izay nofy iray izay no niverina. Karazana superman kely izany tamin'izany. Fa izao tsy nisy intsony.
Angamba misy dikany ara-pahasalamana koa izany. Matetika mantsy ny nofy ratsy dia misy dikany ara-pahasalamana, aretim-po na aty na saina sns. Ka angamba ny manofy tsara na tsy manofy be koa misy dikany hafa.
1 2 3 ... 130 131 132 Manaraka»